Ukuqothula, okuyisisekelo ngaphambi kokushiswa yilanga | Amadoda aSitayela
Ukuqothula, okuyisisekelo ngaphambi kokushiswa yilanga
Singayibiza ngezindlela eziningi, khuhla, gommage, uyaxebuka, kepha ngokuqinisekile ingenye ye- ukunakekelwa okuyisisekelo kobuso bamadoda obathanda kakhulu. Kuyindlela elula yokuzihlanza ebusweni lapho ungahamba khona isikhumba sihlanze ngokuphelele ukungcola futhi ukulungele ukuyifaka futhi umkhiqizo wokwelashwa ungene kangcono kakhulu.
La ukukhululwa isiza isikhumba ukushisa ilanga kangcono kakhulu futhi ngempumelelo kakhulu kuleli hlobo. Impela, ebusika ube nalesi sici esikhohliwe kakhulu, futhi yingakho kubalulekile ukuthi wena susa wonke amaseli afile bese unikeza lokho kuthinta kokuvuselelwa kwesikhumba, qala ukukulungiselela nge-exfoliation.
1 Kungani ukukhuhla kubalulekile enkambisweni yokuhlanza ubuso?
2 Yiziphi izinhlobo zokukhuhla esingazikhetha?
3 Ngingasifaka kanjani isicelo sokukhuhla?
Kungani ukukhuhla kubalulekile enkambisweni yokuhlanza ubuso?
Ukukhuhla noma ukuhluza, ukhilimu noma ijeli equkethe izinhlayiya ezikhipha ifomula lazo, exhumana namanzi nasebusweni, enza lowo mphumela "wesihlabathi noma usawoti" futhi bahudula konke ukungcola esinakho ebusweni. Lapho sithinta isikhuhla, umuzwa uyefana nokuthi sithinte isihlabathi esihle, lesi 'santi' sisusa izingqimba zamaseli esikhumba afile, kushiya i-pore ihlanzekile nokungapheleli.
Kusetshenziswa isikhutha njengesisekelo sokuhlanzwa ebusweni kabili ngeviki, ngaphansi kweshawa nangokubhucungwa okuncane ukuze ingene kangcono kakhulu, sizofinyelela ekutheni lezo zingqimba ezifile zikhishwe esikhunjeni nokuthi amaseli avuselelwe kabusha ukuthola imikhiqizo emisha ye-hydration.
Yiziphi izinhlobo zokukhuhla esingazikhetha?
Ngokuyinhloko emakethe esiyitholayo izinhlobo ezimbili zokukhuhla, ososayensi namakhemikhali.
Ukukhuhla komzimba Yibo abasebenza lapho isenzo sokuqothula senziwa yithi uqobo ngokusebenzisa ukungqubuzana kwesikhuhla esikhunjeni. Lezi zinhlayiya zihudula amangqamuzana afile ebusweni bethu.
Izikhuhli zamakhemikhali aqukethe izithako dSusa ngqo amaseli afile ngokuthintana okulula nesikhumba. Kufanele uwasebenzise ngokuqapha futhi njalo uzibeka ezandleni zikachwepheshe ozokweluleka ukuthi yiluphi uhlobo lwamakhemikhali olulungele kakhulu isikhumba sakho.
Ngingasifaka kanjani isicelo sokukhuhla?
Kubalulekile ukuthi uqonde ukuthi isenzo sokukhipha isikhumba ngaphezulu, akufanele nanini kube isenzo esinolaka. Ukwenza ukukhishwa okulungile, kubalulekile ukuthi ube njalo izandla ezimanzi, izingalo zeminwe, nesikhumba. Musa ukuzihlikihla ngamandla, uma kungenjalo, isikhumba uzosithola sibomvu kuphela. I- ukusikhipha ukuthi uyaqaphela, kufanele kube njalo amnandi futhi uhlikihle wonke amakhona wobuso nentamo yakho ngokucophelela cishe imizuzu engu-5 ukuze umkhiqizo ungene futhi uhlanze kahle. Ngemuva kwalesi sikhathi, hlambulula ubuso bakho ngamanzi amaningi afudumele ukususa izinsalela. Ngokushesha uzobona isikhumba sizacile futhi sibushelelezi, ngaphezu kwalokho uzothuthukisa ukumuncwa kwaso, ukuvuselelwa kwaso namandla e-oxygenation.
Lapho isikhumba sakho sesilungile ngemuva kokukhishwa exfoliation, sizobe sesikulungele ukuncela kangcono ukwelashwa okuthambisa nsuku zonke okufakayo.
Njengeseluleko, musa ukushiswa yilanga ngqo ngemuva nje kokuxebuka. Kubalulekile ukuthi ulinde amahora ambalwa ukuze isikhumba sigcwalise ukuzivikela kwaso kwemvelo.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Izimonyo » Ukuqothula, okuyisisekelo ngaphambi kokushiswa yilanga
Ukungajwayelekile kwezebhizinisi, ukuthambekela okusha emfashinini yamadoda
Dlala i-tetris ukuthuthukisa ubuhlakani